﻿	Ite Nri Chicken Noodle Nri - Ezi Ntụziaka
nkeji osikapa na ude nke ero ofe uzommeputa
gịnị mere m pụrụ iche k Ogwe ike
inine na atịchok itinye achịcha efere
Ite Nri Chicken Noodle Nri
Nke a Ite Nri Chicken Noodle Nri Ntụziaka dị mfe nkasi obi nri niile n'afọ ogologo. Ezie na m hụrụ n'anya na-eje ozi a zuru okè Efere Ọkụkọ Na-acha Ọkụ Crock , Enwere m mmasị na m nwere ike ịmepụta ofe ọkụkọ n'ụlọ na nrụgide ọkụ na nkeji.
Iji Ite ozugbo na-enye ndozi dị mma nke inwe ike esi nri ihe niile n’otu ite maka nri abalị izu ụka.
oji na decker crisp n b Ezi ntụziaka
Ọ dịghị ihe na-edozi ahụ ma ọ bụ na-akasi obi karịa ọkụkọ noodle ofe , akpan akpan ke ini etuep ke ini etuep! Ọ dị ka ịmakụ n’ime nnukwu efere, tinye ya na ọkụkọ dị nro, veggies na noodles.
Cheta ofe nne gị na mmiri ara ehi, ọ na-eji nwayọ nwayọ ruo ọtụtụ awa na stovu ma ọ bụ na-eji nwayọ ngwa ngwa? Ntụziaka ofe achicha ọkụkọ dị ụtọ ma ọ nwere ọsọ ọsọ.
Otu esi eme ofe na ite ozugbo
Ntụziaka a na-ahapụ gị ka ị were ihe si na friji (ma ọ bụ friza) gaa na ọkwá na-ekpo ọkụ nke savory Instant Pot Chicken Noodle ofe n'oge na-adịghị anya.
-esi mee ka febreze na akwa softener
Iji mee ofe kpụ ọkụ n’ọnụ kacha ngwa ọkụkọ:
Ghichaa yabasị na ite ozugbo.
Tinye ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ (ma e wezụga noodles) na nrụgide nrụgide ma tinye ya na nrụgide dị elu 10 nkeji.
Ozugbo esi nri, wepụ ọkụkọ na shred.
Mee ngwa ngwa ite ka sauté tinye noodles ka o sie ruo mgbe obi.
Ngwunye Chicken Noodle Nri ngwa ngwa dị iche iche, gụnyere ọkụkọ osikapa anụ ofe ma ọ bụ ọkụkọ tortilla ofe . Otutu n’ime ntuziaka ndị a na-akpọ maka iji ọkụkọ dum, ọkpụkpụ anụ ahụ na ihe niile. Achọrọ m ịnye gị ihe dị oke ọsọ ma dịkwa mfe, enweghị nsogbu zuru oke kwa izu ma ọ bụ otu anyị siri wee bute ofe ọkụkọ a, ,dị Ikuku Ngwa.
Nwere ike sie nri dị n'ime ite ozugbo?
Kpomkwem, m ugboro ugboro esi nri Ngwa ite Mac na chiiz , ọ dị mfe ma dịkwa ebube. N'ime usoro nri nke mac na chiiz, a na-esi nri dị n'ime ite ozugbo n'okpuru nrụgide.
N'ime uzommeputa a, ngwa ngwa ite na-esi nri ọkụkọ na veggies n'okpuru nrụgide n'agbanyeghị na ọ na-eji 'sie' pasta ahụ site na iji saute ntọala na njedebe. Ọ bụ ezie na enwere ike sie noodles n'okpuru nrụgide na usoro nhazi a, ọkụkọ na noodles chọrọ oge nri dị iche iche na ngwa ngwa ngwa na-ewe oge dị ukwuu iji rute nrụgide.
Etu esi ewepu nrụgide na ite ozugbo
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na isi nri ngwa ngwa, mgbe ahụ, ị ​​ga-achọ ịma maka ụzọ abụọ iji hapụ nrụgide. Nke mbu bu nhapu ahihia nke putara na nsogbu a gha apuputa oge na adighi mkpa imetu ahihia aka.
ndi agwa ojoo ka nke ofia
Usoro a na-enye ohere maka ịga n'ihu na-esi nri ma na-ewekwa oge. Maka ofe kachasị mma ofe noodle ofe, jiri ngwa ngwa hapụ ya. O zuru oke iji rie nri abalị na tebụl n'egbughị oge.
Etu aga - esi wepu ngwa ngwa
Mgbe ị na-eme ofe achicha ọkụkọ nke ọkụkọ, ị ga-eji ngwa ngwa hapụ nri ka ọkụkọ ghara ịmịcha. Mgbe okirikiri ahụ gwụrụ, gbanye okuku ikuku a ka ọ “pụọ” ịhapụ uzuoku.
Jiri akwa mkpuchi ma ọ bụ akwa mposi na-echedo aka gị mgbe niile iji gbochie ọkụ dị ka uzuoku na-ekpo ọkụ. Ntọhapụ ngwa ngwa ga-eme ka nrụgide ahụ daa na sekọnd kama nkeji. Ozugbo a tọhapụrụ ya, mkpuchi ahụ ga-emeghe n'ụzọ dị mfe. Etinyela mkpuchi ahụ ngwa ngwa gị ma ọ bụrụ na ọ naghị emeghe ngwa ngwa, ọ ka nọ na nrụgide ya ekwesịghị imeghe!
Ọsọ ite ite anụ - na mfe
Ọgbụgbọ Ngwa Ngwa
Tacos Chicken Tacos ozugbo (Onye na-esi nri nrụgide) - ụmụ m nwanyị ọkacha mmasị!
Ngwa ite Mac na chiiz
Ite Nduku Mkpo nduku - zuru okè n'akụkụ
4,99site naOgbe 109votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe10 Nkeji Oge nri10 Nkeji Oge zuru ezuiri abụọ Nkeji Ọrụ6 servings Onye edemedeHolly Nilsson ’Re ga-ahụ ụdị nri ọkụkọ ọkụkọ a na-esite na ntanetị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị meela ofe noodle ofe ụzọ ochie. Bipute Ntụtụ
▢ 6qt ntabi ite
▢1 nnukwu yabasị okpokoro
▢abụọ nnukwu anụ ọkụkọ enweghị ọkpụkpụ & akpụkpọ anụ, ihe dịka 8 ounces ọ bụla
▢1 iko karọt sliced
▢1 iko celery sliced
▢1 ngaji pasili ohuru
▢6 iko ọkụkọ efere ma ọ bụ ngwaahịa
▢4 ounce akwa noodles ihe ruru. 2 ½ iko kpọrọ nkụ
Tụgharịa ite ozugbo na SAUTE. Esi nri yabasị na mmanụ oliv ruo mgbe ọ ga-adị nro.
Tinye ihe ndị ọzọ fọdụrụ ma e wezụga noodles. Họrọ SOUP (ma ọ bụ ntuziaka), AKWA nrụgide ma gbanwee oge na 10 nkeji. Ite ozugbo ga - ewe ihe dịka nkeji iri iji wulite nrụgide.
Ndenye ntọhapụ nrụgide. Ozugbo esiri ya, wepu ya ma tufuo akwukwo akwukwo. Wepu araba okuko ma tinye ya na ndu.
Tụgharịa ite ozugbo na SAUTE. Ozugbo broth malitere obụpde, tinye akwa noodles ma kwe ka simmer 6-8 nkeji ma ọ bụ ruo mgbe obi.
Ebido na ọkụkọ na oge na nnu na ose nụrụ ụtọ.
Calorisị:198,Carbohydrates:17g,Protein:19g,Abụba:5g,Cholesterol:64mg,Sodium:Ogbe 120mg,Potassium:463mg,Eriri:1g,Sugar:abụọg,Vitamin A:3730IU,Vitamin C:5mg,Calcium:28mg,Iron:0.8mg
Isiokwuozigbo ite ọkụkọ ofe N'ezieỌkụkọ, Nri abalị, Entree, Isi Agụmakwụkwọ Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .